Qarax aan hore loo arag oo ka dhacay Muqdisho & Dad isku Qoys ahaa oo ku dhintay. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Qarax aan hore loo arag oo ka dhacay Muqdisho & Dad isku Qoys ahaa oo ku dhintay.
Qarax aan hor loo arag ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, markii qof is-miidaamiye ahaa uu isku dhex qarxiyey Maqaayad ku taalla agagaarka Baar Bulsho, degmada Howlwadaag una dhow Isgoyska Sayidka.
Qaraxa ayaa dhaliyey qasaare dhimasho iyo dhaawac leh, waxayna maqaayadii ay noqotay meel ay is dhex galeen dhiigga dadka, dhaawaca iyo burburta goobta, iyadoo geerida ay gaartay markii danbe 3 qof oo isku qoys ah, waxaana sidoo akle dhaawac ah laba qof oo kale oo midkood u ka mid yahay qoyskaasi.
“Ruux naftii halige ah ayaa isku qarxiyay agagaarka Baar-Bulsho ee Degmada Howlwadaag. gaar ahaan suuq yaraha Sayidka. Waxaa ku dhaawacmay 6 ruux oo 4 ka mid ah ay yihiin hal Qoys, Inkastoo markii danbe ay Isbitaalka ku geeriyoodeen 3 ka mid ah qoyskii…” ayuu yiri Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo faahfaahin ka bixiyey qaraxa maanta.
Waa qarax ku cusub Muqdisho in la beegsado Maqaayad ay dad shacab ah ku sugan yihiin iyadoo qof is-miidaamiyey uu fulinayo qaraxa.
Qarax aan hore loo arag oo ka dhacay Muqdisho & Dad isku Qoys ahaa oo ku dhintay. was last modified: March 25th, 2020 by Siid Cali